ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၂ ဦး အသတ်ခံရမှု မြန်မာအလုပ်သမား ၂ ဦးကို ပြန်သရုပ်ဖော်ပြ
ဟောင်ကောင် ဆန္ဒပြသူ နဲ့ ကွန်မြူနစ်ထောက်ခံသူ အဓိကရုဏ်းဖြစ်
ဟိန္ဒူဘုရားပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည့် စန္ဒီမယ်တော် ပူဇော်ပွဲ စစ်တွေမြို့တွင် ၄ ရက်ကြာကျင်းပ
စားကျက်မြေပြန်လည်ရရှိရေး တောင်သူ၁၀၀ နီးပါး ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့တွင် ဆန္ဒပြတောင်းဆို
အခွန်ကောက်သည့် စံသတ်မှတ်ဈေးနှုန်း ၂ ဆနီးပါး တိုးမြှင့်
မြို့နယ်အလိုက် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ တန်ဖိုးစံနှုန်းအသစ် အောက်တိုဘာ ၈ ရက် ထုတ်ပြန်မည်
မင်းတုန်းမင်းရုပ်တုတော်ကို မဖွယ်မရာပြုမူခဲ့ခြင်းကြောင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများအား ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ပါက ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မဖြင့် အရေးယူသွားမည်
ဖေ့ဘွတ်ကြောင့် လူသိများခဲ့သည့် လက်ထောက်ကျောင်းအုပ်ကို လူမှုထူးချွန်ဆရာဆု ပေးမည်
ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် လူသိများခဲ့သည့် လူမှုထူးချွန်ဆုရ ကျောင်းဆရာနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
မကွေးမြို့နယ်တွင် မကွေး-နတ်မောက်ကားလမ်းတွင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားရာ မီးသတ်သန္ဓေတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့
မြန်မာနိုင်ငံသား တချို့ ဗြိတိန် ၂ဦး သတ်ဖြတ်မှုအတွက် သံသယရှိ
ဗြိတိန်ခရီးသွားကို သတ်ကြောင်း မြန်မာနှစ်ဦး ဝန်ခံလို့ဆို
ဟောင်ကောင် ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ အစိုးရကြား ဆွေးနွေးဖို့ သဘောတူ
ဟောင်ကောင် ဆန္ဒပြသူတွေ အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ သဘောတူပြီ
နောက်ဆုံး ၁၇ လ အစိုးရ – အဲခိုး
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နေ့ ဂုဏ်ပြုရပေမည် သို့သော်လည်း . . . – မောင်ရေစက်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘာသာရေး တင်းမာမှုတွေကို ဘန်ကီမွန်း စိုးရိမ်
ဇာတ်ခွဲခြားမှု ပြင်ဖို့ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်း
ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွှဲ အာဏာရှင်အသွင်သစ်ဖို့ ဘီလူးခေါင်းကြီး မိတ်ကပ်လိမ်းနေပြီ – လင်းထိုက် (Y.I.T)
ဦးအံ့မောင်ကို တရားစွဲဆိုခြင်း – မောင်ကျောက်တိုင်
အပစ်ရပ်ရေး မြန်မာ့ အကျိုးစီးပွါး ရှေ့ရှု ညှိနှိုင်းဖို့ EU ပန်ကြား
မော်ဒယ်အေးချမ်းမြတ်မိုးသေဆုံးမှု စွတ်စွဲခံရသူအား ပထမဆုံးအကြိမ်ရုံထုတ်၊ တရားခွင်တွင် ရုန်ရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွား
ယူနတီဂျာနယ် သတင်းထောက်တွေကို ထောင် ၃နှစ်စီ လျှော့ပေး
Posted: 03 Oct 2014 05:35 AM PDT
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဆုရတ်ဌာနီခရိုင် ကော်ဖငန်းမြို့နယ် ကော်တောင်ကျွန်းမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား သမီးရည်းစား ၂ ဦး အသတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ထိုင်းရဲတွေက တရားခံတွေကို ၂ ပတ်ကျော် စစ်ဆေးရှာဖွေခဲ့တာမှာ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာတော့ မြန်မာအလုပ်သမား ၂ ဦးကို လူသတ်မှုသံသယနဲ့ ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ ထိုင်းသတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ ရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး
Posted: 03 Oct 2014 05:02 AM PDT
ဟောင်ကောင်ကျွန်းမှာ ဒီမိုကရေစီ အရေးလိုလားတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ ရက်သတ္တပတ်နဲ့ချီ ကြာလာနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေအပေါ် စိတ်ပျက်နေကြတဲ့ ဒေသခံတွေအကြား သောကြာနေ့က လမ်းပေါ်မှာ ရုန်းရင်း ဆန်ခတ် ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့က ကြားဝင် ဖြန်ဖြေပေးခဲ့ရပါတယ်။ ရာနဲ့ချီတဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီ အုပ်ချုပ်မှုကို ထောက်ခံသူတွေက Mong Kok အရပ်မှာ ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ တဲတွေကို ရိုက်ဖျက်၊ နဖူးစည်းစာတမ်းတွေကို စုတ်ဖြဲပစ် လုပ်ခဲ့ရာက နှစ်ဖက်
Posted: 03 Oct 2014 04:57 AM PDT
အီရတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ Islamic State အစ္စလာမ် စစ်သွေးကြွတွေကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့မှာ ပူးပေါင်း ပါဝင်ပြီး လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ သြစတေးလျ အစိုးရအဖွဲ့က အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ အစ္စလာမ် စစ်သွေးကြွတွေကို လူသတ်အဖွဲ့လို့ တင်စား ခေါ်ဝေါ် လိုက်ပြီး သူတို့ကို အနိုင်ရရှိနိုင်ရေးဟာ သြစတေးလျနိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့လည်း ဆိုင်တယ်လို့ ၀န်ကြီးချုပ် Tony Abbott က သောကြာနေ့မှာေ
Posted: 03 Oct 2014 01:18 AM PDT
ဟိန္ဒူပွဲတော် ၁၃-ပွဲအနက်မှ ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သော စန္ဒီမယ်တော် ပူဇော်ပွဲကို စစ်တွေမြို့ရှိ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းများတွင် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်နေ့ထိ ကျင်းပနေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ ယခုစန္ဒီမယ်တော်ပူဇော်ပွဲတွင် ဆီမီးတစ်ထောင်နှင့် ကြာပန်းတစ်ထောင် ပူဇော်လေ့ရှိကြောင်း၊ ယခု ပူဇော်ပွဲတွင် ဆီမီးခွက် ၁၀၈-ခွက်နှင့် ကြာပန်းပွင့် ၁၀၈-ပွင့် ပူဇော်နေကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ပူဇော်ရခြင်းမှာ
Posted: 03 Oct 2014 01:21 AM PDT
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊ ကျွဲထိုးကျေးရွာရှိ ကျူးကျော် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုး ထားသည့် ကျေးရွာပိ်ုင် စားကျက်မြေ ပြန်လည်ရရှိရေး အတွက် ကျွဲထိုးကျေးရွာမှ တောင်သူ ၁၀၀ နီးပါးခန့်သည် အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ပေါ်သို့ ချီတက်ကာ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ် တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲအား မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲမှ စတင်ခဲ့ပြီး ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ရှိ သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းမှ တဆင့်ေ
Posted: 03 Oct 2014 12:58 AM PDT
အခွန်ကောက်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်း စံသတ်မှတ်ချက်ကို အစိုးရက ၂ ဆနီးပါး တိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အသင်း အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မို့မို့အောင်က ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စံသတ်မှတ်ချက်တွေအရ ၁ ပေပတ်လည် ကျပ် ၂၇၅၀၀၀ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပြည်လမ်းပေါ်က မြေကွက်တွေကို အခု စံသတ်မှတ်ချက် အသစ်မှာ ကျပ် ၄ သိန်း သတ်မှတ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ မြေကွက်တွေဟာ
Posted: 03 Oct 2014 12:55 AM PDT
ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေး နယ် နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ တန်ဖိုးစံနှုန်းအသစ်များကို အောက်တို ဘာ ၈ ရက်တွင် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့က အောက်တိုဘာ ၂ ရက်တွင် သတင်းထုတ် ပြန်သည်။ ယခင်သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်း များမှာ ယခုအခါ ပြောင်းလဲမှုများရှိလာသောကြောင့် လက်ရှိအချိန်နှင့် ကိုက်ညီသော စံနှုန်းအသစ်များကို ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု
မန္တလေးမြို့၊ မြနန်းစံကျော် ရွေနန်းတော်တွင် ယဉ်ကျေုးမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မင်းတုန်းမင်းရုပ်တုအား မဖွယ်မရာပြုမူသည့်ဓါတ်ပုံများ လူမှုကွန်ယက်(Facebook) စာမျက်နှာတွင်ပျံနှံ့ခြင်း အပေါ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး ယင်းကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းများကို ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေအရ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးရုံးခန်း၌ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့ နံနက်၁၀-နာရီခန့်က ရုပ်သံမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံရှင်းလင်းခဲ့သည်။ “ြ
Posted: 03 Oct 2014 12:54 AM PDT
ဖေ့ဘွတ် အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတေ့ာ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအပြီး တပည့်တွေနဲ့ ခွဲခွာရတဲ့အတွက် ဖြေမဆည်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကြောင့် လူသိများခဲ့တဲ့ ချောင်းဦးမြို့နယ် ဆူးလေကုန်းကျေးရွာမှာ ၈ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ လက်ထောက်ကျောင်းအုပ် ဆရာဦးသန်းလှိုင်ကို လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နေ့ နေပြည်တော် အမ်စီစီခန်းမမှာ ကျင်းပမယ့် ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့အခမ်းအနားမှာ လူမှုထူးချွန်ဆရာဆု ပေးအပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted: 03 Oct 2014 12:51 AM PDT
လူမှုကွန်ရက် အင်တာနက်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ ဖေ့ဘွတ်ကြောင့် လူသိများခဲ့တဲ့ လက်ထောက်ကျောင်းအုပ်ကို လာမယ့် ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ဖြစ်တဲ့ အောက်တိုဘာ ၅ ရက် နေ့မှာ အခမ်းအနားနဲ့ လူမှုထူးချွန်ဆရာဆုပေးဖို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ လက်ထောက်ကျောင်းအုပ် ဆရာဦးသန်းလှိုင်ဟာ အထက်အမိန့်အရ ကျောင်းပြောင်းရွှေ့ ဖို့ နှုတ်ဆက်ပွဲ လုပ်တော့ ဆရာ၊ ကျောင်းသားနဲ့ ကျောင်းသားမိဘတွေ ဖြေမဆည်နိုင်အောင် ငိုကြွေးနေကြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ
Posted: 02 Oct 2014 09:08 PM PDT
မကွေး အောက်တိုဘာ ၂ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မကွေးခရိုင်၊ မကွေးမြို့တွင် ယနေ့ (၀၅း၄၀)အချိန်တွင် မကွေး-နတ်မောက် ကားလမ်းတွင် ယာဉ်မောင်း ထွန်းမင်းအောင် (၂၆)နှစ်၊ (ဘ) ဦးမိုးဆွေ နန်းတော်ကျွန်းကျေးရွာ မြိုင်မြို့နေသူ မောင်းနှင်လာသည့် (Misubishe Fuso) အမျိုးအစား GH/5945 (၂၂)ဘီး ယာဉ်သည် အရှေ့မှ အနောက်သို့ မောင်းနှင် လာစဉ် မကွေး လေတပ်စခန်းဌာနချုပ် ရှေ့အရောက် တွင် ယင်းလမ်း၏ ယာဘက်တွက် ရပ်ထားသော ယာဉ်မောင်းတပ်ကြပ်
ထိုင်းနိုင်ငံ ကော့တောင်လို့ ခေါ်တဲ့ လိပ်ကျွန်းမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၂ဦးအား သတ်ဖြတ်သူတွေရဲ့ DNA ကို ခြေရာခံ မိထားပြီလို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲက မနေ့က အောက်တိုဘာလ ၂ရက်နေ့မှာ ပြောဆိုခဲ့သလို ထိုင်း သတင်းတွေမှာတော့ သတ်ဖြတ်သူလို့ သံသယ ရှိတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား ၃ဦးဖြစ်ပြီး တဦးက စတင် ဝန်ခံပြောဆိုကြောင်း သတင်းတွေမှာ ဖေါ်ပြနေကြ ပါတယ်။ ဌာနေ ရဲတွေကတော့ ဒီကနေ့ သောကြာနေ့မှာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပြီး
Posted: 02 Oct 2014 08:50 PM PDT
ထိုင်းနိုင်ငံ ​Koh ​Tao ​ဒါမှမဟုတ် ​မြန်မာအခေါ် ​လိပ်ကျွန်းမှာ ​အသတ်ခံရတဲ့ ​ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ​နှစ်ဦးနဲ့ ​ပတ်သက်ပြီး ​မြန်မာသုံးဦးကို ​ထိုင်းရဲတွေက ​ဖမ်းဆီးထားပြီး ​အဲဒီထဲက ​နှစ်ဦးကတော့ ​အဆိုပါ ​နိုင်ငံခြားသား ​ခရီးသွားတွေကို ​သတ်မိကြောင်း ​ဝန်ခံထားတယ်လို့ ​ထိုင်းရဲက ​ပြောပါတယ်။ ထိုင်းရဲတွေရဲ့အဆိုအရ ​လူသုံးဦးကို ​ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆိုပြီး ​အဲဒီထဲက ​တစ်ယောက်ကတော့ ​ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေကို ​
Posted: 02 Oct 2014 08:24 PM PDT
ဟောင်ကောင်မှာ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆို ဆန္ဒပြမှုတွေ ၅ရက်ကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့အပြီးမှာ ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ သဘောတူလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးဖို့ ဟောင်ကောင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး C Y လီယုန်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ဆန္ဒပြ ကျောင်းသား တွေက လက်ခံလိုက်တာပါ။ မစ္စတာ C Y လီယုန် ရာထူးက မဆင်းပေးရင် အစိုးရ အဆောက်အအုံတွေကို သိမ်းပိုက်ထားမယ်လို့ ကျောင်းသားတွေက ခြိမ်းခြောက်
ဟောင်ကောင်မှာ ​စီးပွားရေးတွေ ​လုပ်လို့မရလောက်အောင် ​ပိတ်ဆို့ ​ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ ​ဆန္ဒပြသူတွေက ​အစိုးရနဲ့ ​တွေ့ဆုံပြီး ​ဆွေးနွေးမှု ​လုပ်ဖို့ ​သဘောတူလိုက်ကြပါပြီ။ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ​တွေ့ဆုံဖို့ ​ဟောင်ကောင် ​အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ​C ​Y ​Leung ​က ​ထပ်မံ ​ကမ်းလှမ်းပြီးတဲ့နောက် ​ဆန္ဒပြ ​ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက ​လူသိရှင်ကြား ​အများရှေ့မှာပဲ ​ဆွေးနွေးမှုတွေ ​လုပ်ဖို့ ​သဘောတူလိုက်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ေ
ပြည်သူ့အလုပ်ကို ဘာတစ်ခု ပြီးစီးအောင် မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နေပြည်တော် အစိုးရဟာ အခုတလော လေသံတွေ က အိမ်မဲ့ယာမဲ့တဲ့သူတွေကို စီမံပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ လိမ်ညာတဲ့ အသံတွေ ထွက်လာပြန်ပါတယ်။ လယ်ယာမြေ တွေကို ပြန်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်တောင်မှ မပြီးစီးသေး ဘဲ ပြဿနာနောက်ထပ်တစ်ပါးတိုးလာဖို့ လုပ်ပြန်တယ်… ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ● စကားချီး လူတစ်ယောက်ဟာ — လူမှုရေးသိပ္ပံ [SOCIOLOGY] မနုဿဗေဒ – [
Posted: 02 Oct 2014 08:21 PM PDT
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရယ်၊ ကိုရွှေမန်းရယ်၊ ဦးသိန်းစိန်ရယ်၊ နောက်ဦးစီးချုပ် ကိုမင်းအောင်လှိုင် ရယ်ပေါ့။ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြောသလိုပဲ ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းနဲ့ တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ လုပ်တာဆိုရင်၊ (Negotiating Method)ကို သုံးသွား မယ်ဆို ရင် ကိုယ်တို့နိုင်ငံ ဟာ အောင်ကို အောင်မြင်မှာပါ . . . ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးတင်လှိုင်(ငြိမ်း) ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Posted: 02 Oct 2014 08:06 PM PDT
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက် မြန်မာ အစိုးရရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ထုတ်ဖော် ချီးကြူး ထားပေမယ့် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး တင်းမာမှုတွေ ဆက်ရှိနေတာနဲ့ ပတ်သက် လို့တော့ အကြီးအကျယ် စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်မိကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ဒေသမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ မွတ်ဆလင်တွေအကြား တင်းမာမှုတွေ
Posted: 02 Oct 2014 08:04 PM PDT
အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီက သန့်ရှင်းတဲ့တိုင်းပြည် ဖြစ်ဖို့ လှုပ်ရှားမှု စတင်ရာမှာ ဝန်ထမ်း တွေအနေနဲ့ စိတ်ထားကိုပါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ အစိုးရအမှုထမ်းတွေကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်တယ်ဆိုတာ အောက်ခြေက တံမြက်စည်းလှည်းသူတွေရဲ့ အလုပ်သာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဇာတ်နိမ့်တွေရဲ့ အလုပ်ကိုရည်ညွှန်း ပြောကြားသွားပါတယ်။ တကယ်တော့ အိန္ဒိယမှာ လူအများစုက ဇာတ်ခွဲခြားတဲ့ စနစ်အောက်မှာ မွေးဖွားလာကြပါတယ်။
Posted: 02 Oct 2014 07:53 PM PDT
အစိုးရရဲ့ လက်ရှိ အာရုံစိုက်မှုကို လေ့လာကြည့်ရင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အာဏာဆက်လက် ကိုင်စွဲရေးကိုပဲ အပူတပြင်း အားကုန်ထုတ် ခေါင်းချင်း ရိုက်နေတာကိုပဲ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ လက်ရှိ အရပ်သားအစိုးရနိုင်ငံရေး ခရီးစဉ်ရဲ့ သက်တမ်းဝက်ကျော်ကျော် ၂၀၁၄ နှစ်လယ်လောက်ကစပြီး ထူးခြား ချက်တစ်ခုကို ပြည်သူတွေ သတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။ အစိုးရထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေဟာ
Posted: 02 Oct 2014 07:48 PM PDT
တရားသူကြီးက ““ဘာများမေးချင်သေးလဲ”” ဟု ပြောရာ ဦးအံ့မောင်က ပါလာသော အမှုတွဲကို ကိုင်ထားပြီးနောက် သံဃမဟာ နာယက အဖွဲ့၏ စေခိုင်းချက်အရ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရခြင်း သာ ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေရှင်း တင်ပြသည့်အခါ ““အဲဒီချေပချက် ရှင်းလင်းချက်တွေကို ဦးအံ့မောင် အလှည့်ရောက်တဲ့ အခါမှသာ ပြောခွင့် ရှိပါတယ်။ ယခုအခါ မေးခွန်းကိုသာ မေးခွင့်ရှိပါတယ်”” ဟု တရားသူကြီးက ပြောပါသည်။ ဦးအံ့မောင်သည် ရှေ့နေလည်း မဟုတ်သဖြင့် ဘာမေးရမှန်း
Posted: 02 Oct 2014 07:37 PM PDT
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိပြုလုပ်နေဆဲ တနိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံးအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွား ကို ရှေ့ရှုပြီး ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းကြဖို့ EU ဥရောပ သမဂ္ဂက တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထု တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေ၊ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု နောက်ကျနေရတာတွေကို အဆုံးသတ်စေဖို့ အတွက် ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ြ
Posted: 02 Oct 2014 07:34 PM PDT
အရပ်သား တပိုင်း အစိုးရရဲ့  ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အစီအစဉ် အောင်မြင်နိုင်ဖို့ အတွက် ပြုပြင်ရေး အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်ထားတဲ့ စာမျက်နှာ (၂၀၀) ကျော် မြန်မာ့စီးပွားရေး စစ်တမ်း Unlocking the Potential ကို ADB အာရှဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်က လွန်ခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လက ထုတ်ဝေထားပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ အမျိုးသား စီမံကိန်းနဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာကံဇော် ကပါ အမှာစာရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted: 02 Oct 2014 02:22 PM PDT
သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့က လည်ပင်းကို ဓါးဖြင့် ထိုးခံရပြီး သေဆုံး ခဲ့သည့် မော်ဒယ် အေချမ်းမြတ်မိုး၏ သေဆုံးမှု ဖြစ်စဉ် စစ်ဆေးခြင်းကို သေဆုံးပြီး ၃၆ရက် အကြာတွင် ရန်ကုန်မြို့ အနောက်ပိုင်း ခရိုင်တရားရုံး၌ ယနေ့(အောက်တိုဘာ ၂ရက်)က ပထမဆုံး အကြိမ် ရုံးထုတ်စစ်ဆေး ခဲ့သည်။ ယခုပထမဆုံး အကြိမ်စစ်ဆေးခြင်းတွင် တရားလိုပြသက်သေများကို စတင်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူ မော်ဒယ်အေးချမ်းမြတ်မိုး၏ အစ်ကိုအရင်းဖြစ်သူ ကိုအာကာဝဏ္ဏအား
Posted: 02 Oct 2014 02:18 PM PDT
နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားမှု ဥပဒေနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်စီ ချမှတ်ခံထားရတဲ့ ယူနတီဂျာနယ်က အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နဲ့ သတင်းထောက် ၄ ဦးကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တရား လွှတ်တော်ရုံးက ထောင်ဒဏ် ၃နှစ်စီ လျှော့ချလိုက်ကြောင်း ဒီနေ့ အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြစ်ဒဏ်ကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ်အထိ တင်သွင်းသွား မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်းထောက် ၄ ဦးရဲ့အမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့